April 16, 2019	Off	By romas
About Counter strike dzakatevedzana
Counter strike mutambo wepamhepo wekutanga munhu kupfura uyo wakatanga kuburitswa kekutanga seHafu-Hupenyu kugadziridzwa naMinh "Gooseman" Le naJess Cliffe muna 1999 uye gare gare muna 2000. Counter-Strike yakaburitswa naValve papuratifomu yeMicrosoft Windows. Nokukurumidza zvakakwana mutambo wakave mumwe weanonyanya kufarirwa mitambo yekupfura pasirese.
Uyu mutambo wepamhepo unomhanyisa uye wakanangana nechikwata - vatambi vanogona kusarudza kuve magandanga kana magandanga. Zvikwata zviviri izvi zvinotamba kusvika chimwe chahwina. Chikwata, icho chinokwanisa kuuraya nhengo dzese dzechikwata chevavengi, chinova mukundi. Zvakare, kune akasiyana mamiriro ekutamba mukati Counter-Strike: Kupondwa, kununura nhapwa, uye kubvisa bhomba.
Mutambo uyu une mamepu mazhinji akasiyana anoitika munzvimbo dzakasiyana siyana senge semuenzaniso wemaguta, arctic, sango nenzvimbo dzerenje. Izvi zvinopa vatambi mukana wekusarudza vari munzvimbo yerudzii yavanoda kutamba. Zvisinei, kubva pakusunungurwa kwe Counter-Strike 1.6, hapana mepu dzakawedzerwa kana kubviswa mumutambo.
Vatambi vanogona kusarudza kubva kwakasiyana-siyana zvombo zvinoratidzwa mumutambo. Vatambi vanogona kusarudza zvombo zvakasiyana-siyana kubva pamapanga kusvika kune pfuti uye submachine pfuti. Paunenge uchisarudza chombo, mutambi anofanira kufunga zvakare kuti zvombo zvinogutsa sei kushandisa. Chimwe chikonzero chekusarudza chombo ndechekuti chinotaridzika kana kuti chinonzwika. Imwe nzira ndeyechokwadi kuona kuti ndezvipi zvombo zvavangangove vachishandisa mumamiriro ezvinhu chaiwo ehondo.
Imwe yazvino Counter strike shanduro, Counter-Strike 1.6, ndiyo huru yezvinyorwa zvekugadzirisa zvemutambo uye nhamba yevhezheni ikozvino yakakurumbira uye inowanzoshandiswa kusiyanisa mutambo wepakutanga kubva kune dzimwe dzakatevedzana. Pano unogona nyore counter strike 1.6 kurodha pc setup uye isa mutambo pakombuta yako.
Pari zvino CS 1.6 zvichida ndiyo inonyanya kuzivikanwa CS game version munyika uye ndiyo inonyanya kushandiswa pakati pevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana.
Counter-Strike 1.6 yakatanga kuburitswa muna Ndira 13, 2003. Iyi vhezheni yemutambo ine zvakawanda zvitsva kubva kune ekare:
Mepu dzakagadziridzwa uye dzakagadziridzwa
Wakawedzera widescreen maonero modes e Hardware anoitsigira
Yakawedzera zoom uye hutano muHLTV
Yakavandudzwa nguva yekutakura kujoina maseva
Yakagadziridzwa marongero uye kutonga kufamba
kubva Counter-Strike 1.6 ndeimwe yeanonyanya kufarirwa kupfura mitambo munyika, kune akawanda akasiyana magadzirirwo uye neshanduro nyowani. Iwo magiraidhi emutambo, tsikidzi, uye kumwe kusimudzirwa kwezvinhu kunoitwa nguva nenguva kune yakagadziridzwa shanduro kuti iwedzere mukurumbira wayo.
Kunyangwe hazvo mutambo wacho uri wekare chaizvo, kufarirwa kwawo kunoshamisa kumusoro. Vanhu vanoramba vachitsvaga kwete vhezheni itsva chete cs kurodha pasi mafaera asi vakuruwo. CS 1.6 ichiri imwe yevakakurumbira yakatorwa mitambo yeCS. Pano unogona download counter strike isina mweya download. Kana usati watoita izvozvo, ingotevera matanho ari nyore anotsanangurwa muchinyorwa chiri pamusoro.
Pano unogona kudhawunirodha imwe itsva XTCS counter-strike 1.6 yekupedzisira shanduro.
Iwe unogona kuverenga iyo download counter strike 1.6 yemahara yakazara vhezheni tsananguro yefaira apa.
Tagspamusoro counter strike 1.6 mutambo pamusoro counter strike mutambo About Counter-Strike 1.6 pamusoro cs 1.6 counter strike 1.6 download counter strike 1.6 download mahara counter strike 1.6 kuzadza counter strike 1.6 mahwindo 10 counter strike download cs 1.6 download cs kurodha pasi download counter-strike 1.6 download cs 1.6 download mutambo counter strike
counter-strike 1.6 zvinodiwa nemutambo
4357 Counter-strike 1.6 mutambi config